Taariikhda My Butros » Sidee loo helaa badan kuuskuus Dating Online
Sidee loo helaa badan kuuskuus Dating Online
Last updated: Oct. 20 2020 | 3 min akhri
The ka hayteen ugu badan ee shukaansiga online waa xaqiiqada ah in dadka weli u arkaan in sida isagoo hawl bulshada khatar ah. Imisa jeer ayaa sidoo taasoo la micno ah (oo inta badan si farxad ku lifaaqan) saaxiibada gasped Naxay markii u sheegay oo ku saabsan goobta internetka matchmaking in aad iminka uun saxiixay on? "Maxaa dhacaya haddii aad la kulanto qof dano?", "Ma ammaan oo dhan?"Iyo" Dhammaan macluumaadka gaarka ah waxaa laga heli doonaa qof kasta oo adduunka si ay u arkaan!"Waa su'aalo caan ah oo comments in mid ka mid caadi helo marka samaynta dhawaaqay in ay ku saabsan in la siiyo goobo shukaansiga online go a yihiin. Iyadoo ay run tahay in ay jiraan khataro u dhacna u barashada shukaansiga online, waxa ay ahaan laheyd been ah u sheegaan in waxa uu noqon lahaa ka khatar badan tahay, odhan, qof ka bar ah soo gaaray. Dhab ahaantii, tirakoobka dhawaan ayaa muujinaya in in 2013, 17% lamaane is qaba ee markii hore la kulmay online.
Sida iska cad, shukaansiga online waa formula oo ah in si fiican u shaqeeya noocyo ka mid ah dadka. Kuwa ayaa guul ku goobahan helay ayaa hore awoodi waayeen in ay la-hawlgalayaasha xaq u sabab u ah dhowr sababood. Sida wax walba oo kale, inkasta oo, tani ma aha hab tusmo inay soo xerogeliyaan muhiimka ah ee kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaashay wadooyinka ugu badan ee aad search farxad u ah, shukaansiga online waa ikhtiyaar ah sida ugu fiican ee kale oo kasta. Users Markii ugu horraysay ee laga yaabo in ay wax yar ka tan badiyey waasicinnay shukaansiga online. First off, waxaa muhiim ma'aha inaan naftaada faafo aad u baahsan. Sure, waa arrin aad u fudud of dhajinta sawir ama laba, qoraal sadarro dhawr ah kuwaas oo u noqono fiican shakhsiyadaada, saxaafadeed gala iyo rabto for ugu fiican. Dhinaca kale, waxay ku fiicnaan lahayd in la sameeyo cilmi baaris yar iyo wax badan uga ogaato oo ku saabsan noocyada kala duwan ee goobaha shukaansiga online in la heli karaa. Waxa kale oo fikrad wanaagsan ah in aad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobood oo ay leeyihiin macaamiisheeda in kuwo joqoraafi ahaan jiidata noqon lahaa.
Marka ilaa wareegto goobaha kala duwan, ha ilaawin inaad ka akhriso print wanaagsanayd. Haa, goobahan waa weyn oo caan ah oo leh heerar guul bararka. Sidaas oo ay tahayna, oo waa inuusan marna xanuujiyo si aad u ogaato oo ku saabsan qiimaha fiiga xubinimo bil kasta. Qaar ka mid ah goobaha lagu yaqaan inay ka qaadaan lacag dheeraad ah si aad u helaan ah xubin ka profiles ballaaran halka qaar kalena laga yaabo in kharashka dheeraadka ah ee lagu guulaystay baaritaan kulan. Had iyo jeer xasuuso in goobahan yihiin ganacsatada kuwaas oo siiya adeeg. Waxaa hubaal ah adeeg fiican laakiin aad weli rabin in la qabsado bixinta badan run ahaantii aad u leeyihiin in. Waxaa jira goobo badan oo fiican aad heli karto oo aan lahayn kharash bam.
Inta badan dadka ay ahaayeen nasiib ku lahaa inaan la kulmo dadka kale ay muhiim ah iyada oo goobaha shukaansi kaliya saasay yeeleen, dadaal iyo dulqaad. Xusuusnow in tani aysan ahayn hab tusmo of geftinka la qof. Sida nolosha, kulan la-hawlgalayaasha imaan karaa ay yihiin natiijada waqti, nasiib iyo joogtaynta. Sida oo kale, ma jabto haddii aad inay soo xerogeliyaan taariikh ka dib markii Bil hore ee saxiixin adeegga shukaansi this guuldareystaan. Rome aan la dhisay ee maalinta iyo maayo xiriirkiina. Qaado waqti aad u maraan shaqsiyad dadka kale kuna xirmaan kuwa aad dareento in aad racfaan inay ugu. Wax dhici kara, laakiin ugu yaraan aad u ogaato waxaad ka dhigtay tallaabada ugu horreysa.
Haddii aad fursad u heshay in ay "kulmi" qof aad jeceshahay online ka dibna si guul xaqiijistay taariikhda a, ha u saarin cadaadis badan ku kulankaan. Sida dhammaan taariikhaha kale ee ugu horeeya, tani noqon doona kulan meeydadka. Sidaas oo ay tahayna, Dib ugu fikir dhammaan taariikhaha aad qaadatay ee la soo dhaafay. Sida xaqiiqada ah kuwa aad jeceshahay ahaayeen kuwa meesha aad ay awoodaan in ay ha timaha oo naftaada ku raaxaystaan ​​la filayo ugu yaraan. A raacsan noqon lahayd in aynu xubin qoyska ah ama saaxiib dhow iyo sidoo ogaado waqtiga iyo meesha aad ka kulanka. Fursadda in aad taariikhda uusan horseedi doonin in wax khatar ah laakiin waxa ay mar walba u ciyaaro waxa uu ammaan.
Users waqti First of sites shukaansiga online laga yaabaa in aad u fiican u heli khibrad cabsi leh. Mid ka mid ah hab wanaagsan oo in la fiirsado waxa ugu noqon lahayd in ay si fudud mid ka mid ah qalabka shukaansi ugu waxtarka iyo waxtar leh ee la da'da casri ah. Xusuusnow in inta badan xubnaha goobta kor u saxiixay Ujeedada la mid ah sida naftaada: si ay u eegaan jacaylka. Sidaas dabciyo garbaha kuwa, qortid in profile iyo bilowdo aad shukaansi safarka online!
Yappily Ever ka dib: Diyaar ma u tahay 'Family milmay' ah?
Waxaad Ma Dateable?